News 18 Nepal || यी हुन् कोरोनाका पाँच खतरनाक लक्षण
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नेपालमा पनि चिन्ता बढाएको छ । भारतमा दिनकै लाखौं जनामा संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत परिसकेको छ । सीमा नाकाबाट स्वदेश भित्रिनेहरुमा संक्रमण दर बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यसको प्रभावका कारण नेपालमा समेत पछिल्लो दुई साता यता हरेक दिन संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
विशेषज्ञहरुले कोरानाको यो जारी दोस्रो लहर अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी घातक सावित भैरहेको दावी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार नयाँ कोभिड स्ट्रेन केवल अधिक संक्रामक मात्र छैन, यसले थुप्रै गम्भिर लक्षणहरु समेत ल्याएको छ । यसैबीच केही बिरामीहरु होम क्वारेन्टिनमै रिकभर भैरहेका छन् भने केहीको स्वास्थ्य बिग्रिएका कारण अस्पतालमा भर्ना भैरहेका छन् । कोरोना पोजिटिभ भएपछि कुन अवस्थामा अस्पताल जानु पर्छ भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गरौं;
सास फेर्न गाह्रो हुनु तथा छातीको दुखाई संक्रमणको सबैभन्दा बढी खतराको संकेत हो । कोरोना भाइरस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन हो र यो भाइरसले हाम्रो ‘अपर ट्रयाक्ट’ मा हेल्दी सेल्सहरुलाई आक्रमण गर्छ । परिणामस्वरुप बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ र उनीहरुको ज्यान नै जाने खतरा बढ्छ ।
कोरोना संक्रमित भएपछि शरीरको अक्सिजन लेभलमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्छ । वास्तवमा, कोरोना पोजिटिभ भएपछि मानिसको फोक्सोको एयर ब्यागमा फ्लूड (तरल पदार्थ) भरिन्छ र शरीरमा अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ । यस्तो भएको बेला बिरामीलाई तुरुन्त अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
बेहोसी अथवा ब्रेन फङ्सनमा समस्या
कतिपय अवस्थामा कोभिड-१९ का बिरामीहरुको ब्रेन फङ्सन तथा नर्वस सिस्टमलाई प्रभावित हुन्छ । कतिपय बिरामीहरुमा कन्फ्यूजन, आलस्यता, छटपटि तथा बेहोसी जस्ता लक्षण समेत देखिएको छ । विशेषज्ञहरुको भनाइ के छ भने यदि कुनै बिरामीलाई सजिला काम गर्न समेत गाह्रो भैरहेको छ अथवा कुनै वाक्य बोल्दा समेत लरबराइरहेका छन् भने उनीहरुलाई तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्छ ।
छातीमा कुनै पनि प्रकारको दुखाइर्लाइ वेवास्ता गर्नु हुँदैन । कोभिड–१९ को क्रममा फोक्सोको म्यूकोसल लाइनिङमा आक्रमण हुन्छ । त्यसैले छातिको यो भागमा बिरामीले दुखाइ तथा जलन महसुस गर्न थाल्छ । यस्तो अफ्ट्यारो भयो भने तुरुन्त अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ ।
कोरोना पोजिटिभ भएको बेला कतिपय मानिसहरुको ओठ तथा अनुहारमा नीलोपना देखिन्छ । यो शरीरमा अक्सिजनको लेभल प्रभावित भएको संकेत हो, जसलाई मेडिकल भाषामा हाइपोस्किया भनिन्छ । हाइपोक्सिया भएको बेला हाम्रो शरीरका तन्तुहरुले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पाएका हुँदैनन्, जसका कारण शरीरले सही तरिकाले काम गर्न सक्दैन ।
ज्वारो, खोकी, घाँटीमा रुखापन, नाक बग्नु, शरीरमा दुखाई, जोर्नीको दुखाइ, स्वाद र गन्ध हराउनु कोरानाका अति नै सामान्य लक्षणहरु हुन् । सामान्यतया यी लक्षणहरु देखियो भने होम क्वारेन्टिन हुने सल्लाह दिइन्छ । यद्यपि, केही मानिसहरुमा यी लक्षणहरु निकै गम्भिर बन्न पुग्छन् । त्यस्तो बेला तुरुन्तै चिकित्सकसंग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
कुन बेला अस्पताल जानु पर्दैन ?
कोरानाका केही त्यस्ता लक्षणहरु पनि छन्, जुन देखियो भने अस्पताल जाने आवश्यकता पर्दैन । तपाईंले घरमै बसेर इमर्जेन्सी सेवामा फोन गरेर यस बारेमा राय लिन सक्नु हुनेछ । हल्का ज्वारो, डाइरिया, थकावट अथवा अन्य कुनै पनि सामान्य लक्षण देखिने बित्तिकै अस्पताल भैहाल्नु पर्दैन ।
कोभिड-१९ भयो भने के गर्ने ?
यदि तपाईं कोरोना संक्रमित भैसक्नु भएको छ भने होम क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसन वार्डमा बस्नु पर्छ । घरमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अथवा कुनै गम्भिर रोगबाट पीडित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनबाट बच्नुपर्छ ।
कसरी राख्ने आफ्नो ध्यान ?
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु के भन्छन् भने यदि तपाईं कुनै संक्रमित व्यक्तिसंग ६ फिटभन्दा कम दुरीमा करिव १५ मिनेटसम्म सम्पर्कमा रहनु भयो भने तपाईंलाई संक्रमण हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहनु पर्छ र घर बाहिर निस्कनुअघि अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्छ र घर आएपछि हातलाई साबुन पानीले धुनु पर्छ अथवा राम्ररी सेनिटाइज गर्नुपर्छ ।